Jehovah Adasefo Boa Adaduafo Ma Wohu Dza Bible No Kyerɛkyerɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Finnish French Ga (Nkran Kasa) Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hungarian Iban Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Malay Mfantse Nahuatl (Central) Norwegian Persian Polish Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tatar Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Valencian Xhosa Zulu
Dabiara da no, adaduafo pii a wɔwɔ U.S. kyerɛw nkrataa bebree dze ba Jehovah Adasefo edwumayɛbea hɔ, dze serɛ mboa ma woeehu dza Bible no kyerɛkyerɛ.
Yedzi hɔn ebisadze no ho dwuma, na yɛyɛ nhyehyɛɛ ma asomfo a wɔwɔ asafo ahorow a ɔbɛn mu kɛsera hɔn a wɔwɔ efiadze ahorow, ayarsabea ahorow nye bea a wɔdze mbofra bɔn kogu, na wɔnye hɔn sũa Bible no.
Wɔ efiadze ahorow bi mu no, hɛn asomfo no kɛyɛ asafo nhyiamu ahorow wɔ hɔ aber nyina. Dɛ nhwɛdo no, aber a wɔyɛɛ nhyiamu ebien wɔ efiadze kor bi mu no, nyimpa 32 na wobetsiee ɔkasa no.
Mfaso a woefi iyi mu aba no hyɛ nkuran paa. Wɔdze ɔbarimba bi kɔtoo Indiana efiadze dɛ ɔnda hɔ no nkwa nda nyinara, osiandɛ nna woebu no fɔ dɛ wɔahyɛ da ekum obi. Ɔbarimba yi ayɛ nsesã pii wɔ n’asetsena mu ma woenuma no dɛ Jehovah Adasefo no mu kor.
Ɔdasefo bi so nye ɔbarimba bi a nna ɔda efiadze kɛse bi wɔ California sũaa Bible no, na ɔkãa faa ɔdaduanyi no ho dɛ: “Mankasa muhun suban a nna okitsa ana orubosũa Bible no, nye nsakyer paa a ɔayɛ. Nsesã a ɔyɛe ana ɔrefata ma woenuma no no nnyɛ asɛm kakraba.”
Adaduafo pii ama hɔn asetsena nye Bible no ehyia, ɔmmfa ho dɛ wonyim dɛ iyi botum dze hɔn nkwa ato esian mu no. Dɛ nhwɛdo no, osiandɛ adaduafo yi mu binom twẽe hɔn ho fii ekuw bɔn ahorow ho ntsi, no ho behiae dɛ wɔdze hɔn nko kɔto beebi anaa mpo dɛ wɔnye hɔn kɔ efiadze fofor dze bɔ hɔn nkwa ho ban.
Sɛ efiadze mpanyimfo hu mbrɛ Bible no tum sesã nkorɔfo asetsena no a, ɔyɛ hɔn nwanwa na hɔn enyi sɔ. Binom ama Adasefo no abɔdzin nkrataa anaa abawdobɔdze dze akyerɛ enyisɔ ama edwuma pa a wɔayɛ no wɔ efiadze ahorow no.
Jesus kyerɛkyerɛɛ siantsir a yehia akwankyerɛ nye mbra ebien a ohia paa no.
Mifi Efiadze Mu Akɔ Eyiedzi Mu
Yɛresesã Nkorɔfo Asetsena, Adaduafo So Kã Ho